Xuska 28aad ee Ginbood oo dalka looga xusey si ka duwan sidii hore |
Xuska 28aad ee Ginbood oo dalka looga xusey si ka duwan sidii hore
Xuska 28aad ee bisha Ginbood ee taariikhda Itoobiya ayaa dhamaan laga xusey dalka oo dhan, maalinkan oo ku beegan maalinkii ay xoogaga EPRDF xukunka ka tuureen kalidii taliyihii mudada 18ka sano ah ka talinaayey Itoobiya.
Xuska sanadkan ayaa ka duwanaa xusaskii hore loo qaban jirey isaga ooku soo beegmay ka dib markii wadanka Itoobiya guud ahaan ka dhacey isbadal dhinaca siyaasada, hogaanka iyo fur furnaantaba ah, gaar ahaan uu isbadal weyni ka dhacey gobolka ismaamulka Soomaaliyada.
Waxaana xuska sanadkan laga dhigey si guud mid ay dadka, ciidanka dawlada iy shaqaalaha dawlada qaarkood ay dhir beeris iyo nadaafad ka sameynayeen deegaanadooda, waxaa kale oo jirtey in aan sidii sandihii hore qofna lagu qasbeyn in uu xuska ka soo qayb galo ayna ahayd mid qof walba ikhtiyaarkii ah.
Madaxdii xuska ka soo qayb gashay ayaa sheegtey in afar kun oo geed maalinki shalay ahayd lagu beerey meelo kala duwan oo deegaanka ah.
Madax weyne ku xeigeenka DDS Aadan Faarax Ibraahim oo ka hadlay madal la isugu yiid ayaa sheegey in ay hadeed ku xusi doonaan Ginbood in la isla xisaabtamo dastuurkana in la fuliyaa in ay tahay waajib, waxaa kale oo madaxweyne ku xigeenku ka dhawaajiyey in waayadii hore sinaba aan loo dabaqin dastuurka wadanka iyo kan deegaankaba, hadeedna dhici mayso ayuu yidhi in cid lagu cadaadiyo magaca dawlada.